Kismaayo News » Awoodda dawladda. WQ Abdikadir Jangali
Awoodda dawladda. WQ Abdikadir Jangali
Waxaa la yaab leh sida aan loo tixgelin qaanuunka iyo shuruucda qaranka loo dhisayey (“Charter” ama “constitution” oo midba wakhti- ahaa) 12kii sano ee u dambeysay, dowladihii ladhisahayey, laga soo bilaabo Dowladii lagu soo dhisay Carta, Djibouti bishi Agosto 2000. Hushma darridaas nidaamka dowlad dhaqmeedka oo aan la dhowreyn wuxuu dhalinayey iska horimaadka madaxda sare ee dowladda sida: Madaxweynha, Raisul -wasaaraha iyo goddomiyaha Barlamaanka oo dagaalkoodu joogto noqonayay marwalba, taas oo keentay 7 raisul-wasaare , 5 goddomiye barlamaan iyo 4 madaxweyne muddo 12 sano ah in Soomaaliya yeelato.
La isma-weydiiyo miyaa wixii fashiliyey dowladdihii kala dabeeyey? Waxaa fashaliya gacandhaaf shaqada la isu gacandhaafayo. Bishii November 2004 ayaa Cabdiraxman Yabarow oo BBC u fadhiyey magaalada Washington DC ayaa Aniga Jangeli ah, Abdiqafaar Wardhere, Mahadalla (ma aha Prof. Mahadalla) iyo Anisa ayaa naga wareystay waxa ay qabankarto 3da bilood oo ugu horreysa dowladda cusub ee Cabdullahi Yusuf Ahmed iyo Prof. Maxamed Ali Ghedi. Aniga jawaabtaydu waxay ahay haddi ninwalba shaqadiisa loo daayo oo madaxweynuhu uusan xukuumadda ku farageli raisul-wasaaraha meel sare ayey gaareysaa maxaa yeelay tii Cabdiqaasim iyo Galeydh baan xusuustaa in howshii ka ka dhamaan weyday isku qabqasigoodii iyo dagaalkoodi. Arrintaas intii ka dambeysayna isga warrami mayno in tilaabo horay loo qaadi waayey dagaalka dhexmaraayey madaxdasare awgeed.
Hadaba waxaan dhegeysta shalay khudbad aad u wanaagsan oo Madaxweyne Hassan Sheikh u soo gudbiyey ummadda Soomaalida haseyeeshee waxaan ka dhadhansaday in bilow is maandhaaf ah ka jero asaga Iyo Raisul-wasare Saaci Shirdoon. Khudbaddas lafteedana Madaxweynuhu wuxuu sheeganayaa shaqadii Raisul-wasaraha in uu qabanayo asagu. Waxaan maqlaynay in madaxeynhu uu wasiirada qaarkood magcaabay asagu khudbadiisana ku lahaa waxaan magacaabeynaa wasiiro ku xigeen agaasimayaal iyo safiiro taas oo ka soo horjeeda howsha sharcigu u ogolyahay madaxweynaha taasaana keenta dagaalka madaxada sare. Waxaa naloo sheegay in laga baxay ku meel gar dowlad ah luguna daqmidoono dastuurka wixii hadda ka dambeeya. Hadaba Aniga oo hoos ku minguurinayaa xilka iyo awooda madaxweynah sida uu sheegayo dastuutku waxaan xaasuusinayaa akhistayaasha in madaxweyne Aaden Cabdulle cusman iyo Raiwasaarayaahii wakhtigaas sida ay howsha u kale lahaayeey.
Madaxaweynaha haddi daku doorto sida Djibouti, Kenya, USA howl maalmeedka shaqada dowladda iyo magaacbidda xubnaha xukuumadda ama saraakiisha dowladda noockasta oo ay yihiin asaga ayaa magacaaba lakiin madaxaweyna haddi baarlamanku dorto howshiisu way koobantahay oo wakhti mucayana ayey ku koobantahay taas oo Soomalida haddan eegno ku qeexan qodob 90 ee dastuurka sida hoose ku qoran. Dowladaha sida Ethiopia, Italy, Germany magacayada Madaxweynayaashooda meel aad saxaafadda ku arkeysid ma jirto, lakiin raisulwasaarayaasha ayaad shirarka caalamiga ah iyo waxqabdka dowladdoda ku arkeysaa maxaajira barlamaanka ayaa doorta sideena oo kale madaxweynaha. Bal u fiirsada qodobkaan 90 ee dastuurka waxaa lagu qeexayaa in madaxweynu saxiixa ogolaansha si loo sharciyeeyo keliya uu leeyahay markii xukuumaddu soo jeediso magac shaqkhsi ama mashruuc ee asagu shaqsiga keliyo oo uu magacaabikaraa uu yahay Raisul-wasaaraha.
Waxaan ku soo gunaanadayaa in dib loo xasuusta marlawalba dastuurka oo haddi aan lagu dhaqmin lagu fashalaya howlaha kale oo dhan maxaa jira waa saldhigaa la isku hago, ummaddana loogu shaqeeyo haddi aan la ixtiraaminna saaxiibtinimada iyo isjacaylku aysan shaqeyneyn muddo kaddib.
Arrintaano waa iga digniin wixii aan horay ugu soo jabnay in aan lagu celin celin. Mahad gooniyana waxaan u celinayaa Prof. Cabdirahamaan Sheikh Badiyow oo markuu isusharraxay Madaweynaha si qayaxan u sheegay una xusay qodobadaan sheegaya awooda madaxeynaha ballan qaadayna in uu ku dhaqmayo haddi la doorto.
Abdulqaadir Aden “Jangeli”